2 askari ayaa ka dhintay AMISOM - BBC News Somali
2 askari ayaa ka dhintay AMISOM
3 Luulyo 2010
Image caption Mid ka mid ah gawaarida gaashaaman ee ciidamada AMISOM
2 askari, ayaa ka dhintay ciidamada Amisom, 3 way dhaawacmeen, taangina dab ayaa qabsaday sidaas waxaa sheegay afhayeenka ciidamada AMISOM, Brighye Bahuko.
Dagaalka, ayaa sadexdii maalmood ee la soo dhaafay ka socday deegaanada Cabdulcasiis, Shibis iyo Kaaraan, iyadoo xoogiisa uu ahaa furinta dagaalka ee Fiat.
Afhayeenka, oo shir jaraa'id ku qabtay Muqdisho, ayaa u sheegay weriyayaasha in ciidamadooda ay u dhaqaaqeen si ay dib ugu qabsadaan dhul uu sheegay in shacabuu deganaa, balse markaa kadib ay weeraro ku soo qaadeen kooxaha ka soo horjeeda dowladda.
Wuxuu sheegay in si sharci ah ay ciidamada AMISOM u joogaan Soomaaliya uuna ogol yahay caalamka iyadoo ay ansixiyeen madaxda Africa. Wuxuu sheegay in aysan u hakan doonin askar laga dilay oo ay sii wadi doonaan howlaha ay Soomaaliya u joogaan, wuxuuna intaas ku daray in dadka iyo dalka Uganda aysan niyadjabin doonin weerarada lagu soo qaaday.
Mar wax laga waydiiyay madaafiicda lagu eedeeyo in ciidamadoodu ay ku garaaceen goobo rayid ah oo suuqyo iyo isbitaallo ku jiraan, ayaa wuxuu sheegay in ay madaafiicda iyo dadka dhintay ay mas'uul ka yihiin kooxaha "nabad-diidka ah". wuxuu yiri hadafkeenu ma aha in aan shacabka dhibaatayn, isagoo sheegay in ay Soomaaliya u tageen in ay nabadda ku soo celiyaan oo ay ilaaliyaan hay'adaha dowladda.
Ciidamada AMISOM, ayuu sheegay in madaafiicda ay la eegtaan bartilmaameedyada ciidamada ee gaarka ah. Wuxuu ku adkaystay in hadii wax uu ku tilmaamay khadka cas la soo dhaafo in ay ka jawaabi doonaan laakiin aysan iyaguna weerar qaadi doonin.
Afhayeenka Amisom, Brighye Bahuko, ayaa sheegay in ay fariisin ka samaysteen hoteelkii Juba oo u dhow agagaarka Fiat oo dagaalada xoogoodu ka socdeen.